राजनीतिक पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता : RajdhaniDaily.com - राजनीतिक पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता
Home बिचार राजनीतिक पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता
एकताका राजनीतिक परिवर्तनले मात्र होइन, सत्ता परिवर्तनले पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई उत्साहित गराउँथ्यो । विगतको भन्दा वर्तमान नेतृत्वले मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ भन्ने आशा जनतामा पलाउँथ्यो । निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समयानुकूल सरकारले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने सबैको विश्वास हुन्थ्यो । सरकारले पनि देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्थ्यो । तर, उही सत्ता, उही प्रक्रिया, उस्तै नेतृत्व हेरफेर हुने भए पनि अहिले सत्ता परिवर्तन जनसरोकारको विषय भए पनि चासोको विषय बन्दैन ।
यसको कारण आशलाग्दा नयाँ अनुहारले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने मौकै पाउँदैनन् । उनै दुर्गन्धित स्वार्थी व्यक्तिहरू नै बराबर सरकारमा पुगेको परिदृश्य अहिले जनताको उत्साह होइन, नैराश्यको कारण बन्छ । पहिले फलानो बहादुर प्रधानमन्त्री भयो भन्ने सुन्दा जनताका काम ठाडा हुन्थे तर अहिले फलानो बहादुर प्रधानमन्त्री हुँदै छ भन्ने सुन्दा जनताका कान खस्कन्छन् । बहादुर त दुवै नामका बहादुर हुन काँतर होइनन् तथापि उनीहरूको कार्यशैली भने बहादुर हुँदैन ।
पछिल्लो समयको सत्ता फेरबदल ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने लोकोक्ति जस्तै बन्ने गरेको छ । अहिलेको सत्ताको फेरबदल सर्वसाधारणका लागि होइन दलीयगुट उपगुटका लागि भने उत्साह र चासोको विषय बन्छ । विरोधी गुटलाई पछि पारेर आफ्नो गुट सत्तामा पुगे गुटगत फाइदाबाट लाभान्वित बन्न पाइने लालसाले नेता कार्यकर्ताका काम ठाडा हुन्छन् । यो राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा हो । हाम्रो मुलुकको राजनीति अहिले यही अवस्थामा पुगेको छ ।
लोकतन्त्र सँगसँगै भित्रिएको दूषित राजनीतिक वातावरणभित्र दलीय सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले बढावा पाउँदै आयो गुटगत राजनीतिलाई सुसंगिठत बनाउन जस्तोसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पनि नेताहरू पछि परेनन् । सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरूकै खरिद बिक्री हुन थाल्यो । सत्ता जोगाउन शीर्षस्थ नेताले नै यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरण दिँदै ल्याए । यस्तै, दूषित राजनीतिक पृष्ठभूमिभित्र भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पायो ।
लोकतन्त्रको नाममा गुटतन्त्र हावी हुँदै आएपछि व्यक्ति नै सर्वेसर्वा बन्नु स्वाभाविक हो । यही क्रममा राज्यका ऐन कानुनभन्दा नेताकै आदेश ठूलो ठानियो । विधिभन्दा व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामा राज्य सञ्चालित हुन थाल्यो । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद् र सिंगो पार्टीपंक्ति नै व्यक्तिको पछि लाग्ने अवस्था आएपछि जनताको भन्दा नेताको स्वार्थ महत्वपूर्ण बन्दै आयो । सरकारलाई लगाम लगाउने संसद् निरीह बनेपछि सरकार प्रमुख लगाम बेगर स्वतन्त्र विचरण गर्नु स्वाभाविक हो । दललाई भन्दा गुट उपगुटलाई ठूलो ठान्ने, गुट÷उपगुटभन्दा त्यसको नेतृत्वलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, शीर्षस्थ नेताले आफैंलाई राज्य मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देश र जनताको हित हुँदैन । सबै दलका अहिलेका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरू यही मानसिकताका छन् ।
लोकतन्त्र सँगसँगै भित्रिएको दूषित राजनीतिक वातावरणभित्र दलीय सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले बढावा पाउँदै जाँदा जस्तोसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पनि नेताहरू हिचकिचाएनन्
स्वेच्छाचारी र अवसरवादी नेताहरू नै बराबर पालोफेरोमा सत्तामा पुगिरहने हो भने निकट भविष्यमा मुलुकमा अर्को राजनीतिक संकट आउन सक्छ । यसर्थ देश र जनताको हित चाहने हो भने मुलुकमा अब राजनीतिक पुस्ताअन्तर अनिवार्य छ । सरकारको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताका युवा नेताले सम्हाले राजनीतिक पुस्तान्तर भएको मानिन्छ । नेतृत्व तहमा पुगे राज्यलाई गतिशीलता प्रदान गराउने क्षमता भएका योग्य युवा नेताहरू अहिले सबै पार्टीमा छन् ।
यस्ता प्रतिभाशाली युवालाई स्वार्थको राजनीति गर्न खप्पिस अग्रज नेताले छायामा राख्दै आएका छन् । युवा नेताको जोस, जाँगर, परिपक्व र स्वच्छ विचार तथा इमानदार र उदार कार्यशैली राष्ट्रहितको कार्यमा समर्पित गराउने बेला यही हो । स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट, असक्षम, बराबर कलंकित बन्दै आएका तथा राजनीतिबाटै अवकाश दिलाउनुपर्ने कतिपय शीर्षस्थ भनिने सबै दलका अगुवा नेतालाई अब जनताले पुनः सत्तामा पु¥याएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्नुहुँदैन ।
अझै पनि अस्ताउँदा नेताकै हातमा राज्य सुम्पिने हो भने मुलुकै भविष्य अन्धकार हुन्छ । उदाउँदो युवा नेताको हातमा सत्ता सुम्पिए मुलुक चहकिलो बन्छ । बराबर सत्ताको स्वाद चाखेका अवकासोन्मुख नेताका लागि राजनीतिक पुस्तान्तरको कुरा सह्य नहुन सक्छ । किनकि पार्टीमा देखिएको युवा शक्तिको उदय ज्येष्ठ पुस्ताका नेताका लागि घातक हुनु स्वाभाविक हो । हुन त कतिपय युवा नेतामा अग्रज पुस्ताकै अस्वस्थ्य राजनीतिक प्रभावको छाप परेको नहोला भन्न सकिन्न ।
तथापि, परीक्षणकै रूपमा प्रस्तुत हुने उनीहरूको कार्यशैली देश र जनताको निम्ति लाभदायक बन्न सक्छ । किनकि उनीहरूको राजनीतिक जीवन लामो छ र लोकप्रियता आर्जनको निम्ति सत्ता सञ्चालन उनीहरूको परीक्षणको कसी नै बन्न सक्छ । अस्ताउँदो सूर्यलाई भन्दा उदाउँदो सूर्यलाई नै सबैले पूजा गर्ने भएकाले युवा नेतृत्वप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हुन्छ । विगतकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने पञ्चायतकालमै केही युवा नेताले मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरूको कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना आइसकेको भए पनि त्यो निष्प्रभावित रूपमै व्यवहारमा अझै निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन पाएको छैन । किनकि समस्याको भुमरीमा रहेका अधिकांश जनताका लागि राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत समस्या महत्वपूर्ण ठानिने भएकोले उनीहरू नेताको स्वार्थप्रेरित लालचबाट उत्तिखेरे प्रभावित बन्न बाध्य हुन्छन् । विपन्न जनताको दयनीय अवस्थाको फाइदा नेताहरूले लिइरहेका छन् । क्षणिक स्वार्थ र प्रलोभनभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित सर्वोपरी हो भन्ने मानसिकता सबैमा जागृत भइसकेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार र देश विकासमा समर्पित रहने राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अहिले स्वार्थको राजनीतिले विस्थापित गरिसकेको छ ।
पद लोलुप उही परम्परागत प्रवृत्तिकै नेताहरू बराबर अगाडि आइरहने कारण पनि यही हो । सत्तामा पुग्ने, टिकिरहने र दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा मरिमेट्ने राजनीति स्वच्छ राजनीति होइन । यस्तो दूषित राजनीति गर्दै आएका व्यक्तिको निम्ति क्षमतावान्, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकार तथा विषयवस्तुका बारेमा तार्किक ढंगले बहस र चर्चा गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति घातक ठानिन्छन् । यस्तो सक्षम व्यक्तिभन्दा नेताको नजरमा आफूप्रति अन्धोभक्ति देखाउने सामान्य लेखापढकै पिछलग्गु व्यक्ति बढी सहयोगी बन्ने भएकोले शीर्षस्थ नेताहरूले यस्तै, एस मेनलाई संसद्मा पु¥याउँदै आएका छन् । संसद् निरीह बन्ने प्रमुख कारण पनि यही हो ।
वास्तवमा संघीय संसद्मा पुग्ने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखकै उम्मेदवार बन्ने हैसियतको मानिन्छ । यो हाम्रो संवैधानिक विशेषता नै हो । संघीय संसदको सांसद पदमा निर्वाचित जोसुकै पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेको भए पनि त्यस्तै व्यक्ति छनोट गर्ने क्रममा उसको योग्यता, राजनीतिक हैसियत र कार्यदक्षता, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बारेको ज्ञान, इमानदारिता तथा जनउत्तदरायी कार्यशैली कस्तो छ ? भन्नेबारेमा जनता अझै संवेदनशील देखिँदैनन् ।
परम्परागत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने होइन, विकास र प्रगति गर्ने युवा नेता देशले चाहेको छ
पार्टीले उम्म्ेदवार बनाएको व्यक्ति योग्य होस्न-होस् जनतालाई मतलब हुँदैन तर त्यस्तै, व्यक्तिलाई पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा विजयी बनाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको ठान्ने अदूरदर्शी जनदृष्टिकोणबाट शीर्षस्थ नेताले फाइदा लिइरहेको छन् । यसले गर्दा अधिकांश त नेताकै पिछलग्गुहरू नै संसद्मा पुग्ने गरेका छन् । यस्तै सांसदहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्दा एका दुई शीर्षस्थ नेताकै पार्टीदेखि सरकारसम्म हालीमुहाली हुने गर्दछ । जुन अहिले भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आयो तर नेताहरूकै कार्यशैलीमा परिवर्तन आएन । राजनीतिक सिद्धान्तलाई वैचारिक बहस र चर्चाको विषय बनाउनुपर्नेमा नेताहरूबीचको व्यक्तिगत स्वार्थलाई बहस र चर्चाको विषय बनाइयो । गरिमामय जनप्रतिनिधिमुलक संघीय संसदलाई, प्रतिभाशाली बौद्धिक व्यक्तित्वहरूकै अखडा बनाउनुपर्नेमा नेताकै पिछलग्गु दस्तामा रूपान्तरित गरियो । देश र जनताको हितले भन्दा संसद्मा नेताको स्वार्थले महत्व पायो । कुसंस्कार र कुप्रवृत्ति अन्त्यको निम्ति संसद्मा पारस्परिक विचार र दृष्टिकोण मन्थन हुनुपर्नेमा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मन्थन हुँदै आयो । यस्तै परम्परागत विकृतिको अन्त्य गरी मुलुकको राजनीति स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक पुस्तान्तर अत्यावश्यक छ । सात दशक पार गर्दा पनि अझै आफूलाई युवा ठान्ने संकुचित मानसिकताका अनुदारवादी निष्क्रिय नेतालाई नपन्छाएसम्म अब मुलुकको विकास हुन सक्दैन ।
यसर्थ मुलुकले अहिले स्वेच्छाचारिताको होइन, सिद्धान्तको राजनीति गर्ने व्यक्ति खोजिरहेको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने होइन विकास र प्रगति गर्ने युवा नेता चाहेको छ । कस्तो व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनको दायित्व सुम्पने ? अब नेपालीले नै सोच्नुपर्दछ । जनतालाई धोका दिने होइन, काम गरेर देखाउने नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ । यस क्रममा देश र जनताकै हितलाई सर्वोपरी ठान्ने, पदीय दायित्व कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्ने, व्यवहार र कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी भएको, निष्कलंक र उदार मानसिकताको, निस्वार्थ इमानदार तथा दृढ नेतृत्व वहन गर्ने खुबी भएको युवा नेतालाई सत्तामा पु-याइए मुलुकमा परिवर्तन आउन सक्छ । यसप्रति सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
एजेन्सी - June 11, 2020 0
लन्डन । इंग्लिस मिडफिल्डर एडाम लालनाले इंग्लिस क्लब लिभरपुलसँग छोटो समयका लागि सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । लालनाले यो सिजनको अन्त्यसम्मका लागि लिभरपुलसँग सम्झौता...
‘सलहको संख्या बढ्यो भने कृषिबालीमा क्षति पु-याउछ’
राजधानी समाचारदाता - June 27, 2020 0
बारा । भारतको बिहार हुँदै नेपाल पसेको सलह किराको समूह बाराको निजगढ, सिमरा लगायतका स्थानहरुमा देखा परेको छ । यो किरा देखिए सँगै किसानहरुमा...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - October 21, 2020 0
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र भगवती जात्रा
बिचार प्रेममान डंगोल - August 8, 2020 0
भगवान् श्रीकृष्ण यस जगत्का उत्पति, स्थिति र प्रलयका कारक हुनुहुन्छ । श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ । यस्ता भगवान् श्रीकृष्णको सबैले वन्दना गर्नुपर्छ र मान्नुपर्दछ...
प्रदेश राकेश गुप्ता - March 14, 2020 0
प्रदेश १ विवेक रेग्मी - May 29, 2020 0
प्रदेश २ रासस - September 7, 2020 0
लहान । कोरोना सङ्क्रमणबाट दुई दिनको अवधिमा सिरहामा थप दुई जनाको मृत्य भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका– ५ का ६२ वर्षीय र...